Data Sayenzi seSevhisi (DSaaS): Kuongorora Dhata Zvirinani - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Data Science, zvigadzirwa zvetekinoroji, zvigadzirwa zvetekinoroji, Uncategorized
Data Sayenzi seSevhisi (DSaaS): Kuongorora Dhata Zvirinani
DSaaS or Data Sayenzi seSevhisi rudzi rwekutsvagisa rinotenderera kuendesa iyo data yakaunganidzwa nerubatsiro rwekufambira mberi analytics kunyorera. Iko kunyorera kunoshandiswa neve data masayendisiti pane imwe kambani yekunze kuitira kuti vagone kutengesa vatengi kuitira kuti vawedzere yavo yekugadzira chiyero. Maitiro makuru eDSaaS ndeyekuunganidza dhata kubva kune anodzivirira uye kugadzirira ongororo yakakodzera wozoita zvine hungwaru algorithm mukupesana nedata rakakwenenzverwa. Izvi zvinobatsira kudzosera mhedzisiro ichave inogadzirwa nealgorithm kune vatengi.
DSaaS: Ko maGiants ari kuzviita sei?
Vatengi vanofanirwa kuisa iyo data kune hombe data chikuva kana gore dhatabhesi. Iyo data sainzi uye webasa revapi vechikwata rakanyatso kuverengerwa neinjiniya dhata rinoshanda pane yakadhindwa data Ivo vanozoongorora iyo data iyo inogona kugadzirira mushumo pane iyo kambani ingangotenga zvigadzirwa zvako, yako yeanokwikwidza ruzivo, yako mambure mibairo, mari, nezvimwe. Iyo ingori nzira yekuvandudza yako yemusika musika mufananidzo nekushandisa zvakapusa manomano.
Iwo makasitoma ndiwo akakosha emusika wanhasi neyakaomesesa chigadzirwa kusimudzira. Netekinoroji iripedyo, vatengi vanobata simba rakawanda uye rakangowedzeredzwa nevezvenhau senhare yekutaurirana.
The big industries are converting into the customer-centric firms that revolve around the demand and requirement of the targeted audience. The interaction has hyped up over the year with the help of mobile and dandemutande budiriro. Not only this, but it is also used to broadcast a message on a large scale. The content is becoming more and more relevant with time, grabbing attention, and adding intricacy to the purchaser’s involvement management. You simply can’t hide the poor service from the customer giving full control to the audience.
Kunze kweizvi, iro hombe zita rezita senge Google, Apple, Amazon, uye Facebook zvave kutoenda pamusoro pavo mabatiro evatengi zvakajairika zvichiita kuti zviomere vamwe kuti vateedzere. Ivo vari kutora dzimwe dzakaomarara nzira dzekutengesa, nyore kutengeserana, uye kubhidha purofiti. Vatengi vane ruzivo manejimendi vafamba zvinoshamisa kuB2B, B2C, uye mubatanidzwa. Zvimwe kunze kweizvi, kukura kunogona kuve kwakakwirira uye makambani madiki ari kunzwisisa kuti zvinongokura zvakanyanya mune ramangwana.
Hype mu data hainawo kuvanzika kune chero munhu sezvo vanhu vari kunzwisisa kudiwa kweruzivo nekutangisa kwakawanda uye kwakawanda tekinoroji. Iyo tekinoroji inowana mukurumbira ndeye Advanced Analytics, SaaS, Big Data, Machine Learning, Cloud, Data Sayenzi, Mune-Ndangariro, NoSql, Internet Zvinhu, uye chaiyo-nguva, Kufanotaura, Kusarudzika, uye OmniChannel. Asi zvakadaro, zvinhu zviri kure kure nezvinodiwa chaicho.
Uyewo Verenga: 5 Anoshamisa Mashandisiro mashandiro eData Sayenzi
Izvo Zvinodiwa zveTekinoroji
Kutengeserana kwepamhepo kwave iko kwakanyanya kukosha chikamu chenyama nharaunda. Izvo zvakakosha zvinodiwa mune aya mazwi zvinouya nekudyidzana uye ruzivo rwunogona kubviswa kubva kune vateereri. Izvo ndezve kutungamira mutengi kune chakakodzera chigadzirwa chinodiwa navo kwete chete sevhisi iyo isingatomboenderana nechinodiwa cheanogona mutengi.
Chinhu chekutanga chinobaya pfungwa dzako chichava kushambadzira kwedhijitari izvo zvinozotarisa kune vangangove vatengi nerubatsiro rwemazwi akakosha anoshandiswa. Nekudaro, iyi nzira iri nzira yakajairika uye inonzwisisika. Izvo zvakakosha kushandisa iyo yakawanda data iyo inogona kupa yekutanga-ruoko kudzika ruzivo nezve mutengi wevatengi kuburikidza iyo zvinova nyore kunongedza vateereri uye kwete kupa chero zvisina basa kutsvaga.
This entire process depends on the data scientists who are responsible to understand the customers demand and analyze the data to help the marketing team to communicate with the customer with the help of more influencing performance. However, just because data will be analyzed doesn’t mean that you won’t require the marketing team. The marketers are the essential base for your business as they understand the perception, beliefs, and desires of a customer. However, the role of data sainzi becomes a question.
Shanduro dzepamberi dze gore kadambari zvaita kuti zvive nyore kune bhizinesi bhizinesi kuongorora uye kuunganidza iyo data uye kuitisa iyo mune chaiyo-nguva. Izvi zvinobatsira kutungamira vashambadziri kuti vashandise zvishandiso zvekudzidzira-wega. Izvi zvinobvumira vatengesi kuti vabate zvakatsiga pane ruzivo rwevatengi. Iyo DSaaS ndiyo ramangwana reshambadziro rekushandisa.
Uyewo Verenga: 4 Nzira Nzira Dhijitari Dhata iri kuchinja Data Sayenzi
Kukosha kweData Monetization
Kune makambani mazhinji akavhiringidzika nezvekutengesa iyo data. Vakarova mumubvunzo wekuti vangakure sei mari yebhizinesi nerubatsiro rwe data. Chinhu chakanyanya kukosha kuongorora kuongorora kwechigadzirwa uye kuti sei vatengi vari kuzotenga. Kuti uite kudaro, makambani anoenderana neongororo kana kunyatso tarisa boka diki revanhu.
Izvi zvinovabatsira kuti vatore iyo data kuburikidza iyo yavanogona kuumba yavo yekushambadzira matekinoroji. Kunze kweizvi, ivo vanowana kapfupi zano nezvekuti sei uye nei mutengi achizobata nezvechigadzirwa chakakodzera. Kuti uwane ruzivo rwakakodzera mhando zhinji dzedata sainzi matekiniki anoshandiswa anogona kupa zivo chaiyo.
Izvo zvinobatsirawo mukufungidzira kudiwa uye kupihwa kwechimwe chigadzirwa icho chisati chatanga. Nekuda kweizvi, kambani inogona kuwedzera fungidziro mune yavo yemari chati. Kune makambani mazhinji ekupedzisa maitiro aya vachishandisa pie iri mudenga pfungwa apo mamwe makambani anoshandisa iyo data sainzi nzira.
Uyewo Verenga: 6 Zvikonzero zvekusarudza R yeData sainzi
Ndichiri kuongorora iyo data, chinhu chakanyanya kukosha icho musayendisiti wedata anochengeta mupfungwa ndiko kuchengetedzeka kwedata ravari kushandisa. Imwe yakapusa misplace data inogona kurasikirwa kukuru kune chero kambani. Zvisinei, makambani haadi ruzivo runozivikanwa kubva kune chero wevatengi senge rake zita. Chinhu chega icho ivo chavanowanzo tarisa ndeye mushandisi ID iyo inogona kuvabatsira kuti vaite nyore basa ravo nenzira kwayo. Izvi zvinobatsira mukugadzirisa kuchengetedzeka kunetseka kwemutengi.
Uyewo Verenga: Wepamusoro mashanu mhinduro kune Big Dziviriro Dziviriro Matambudziko
Data Sayenzi Kubvunza
Data sainzi sevhisi sekutsanangurwa pamusoro apa mhando yekutsvaga nzira iyo inongotora data kubva kumutengi uye kuiongorora nerubatsiro rwema algorithms mazhinji. Ndichiri kuita kudaro chinhu chikuru chichauya ndeche kuchenesa data. Mhedzisiro mhedzisiro inozochinja zvakanyanya kana paine chero mhando yeasina kunaka dhata pane irwo runyorwa. Kuti vakunde izvi, makambani anoenda kuburikidza neiyo data uye vanogadzirira chati yemitengo isipo.
Ipapo DSaaS inogadzirira algorithm zvinoenderana nedhata iyo inogona kuendesa yakakodzera uye inoenderana mhedzisiro munguva yakapihwa. Nekudaro, kune makambani mazhinji ayo anopa kupa masevhisi ekuvhenekesa nema algorithms ekuona kutonga kwedata. Chinangwa chikuru chemafemu akadaro ndechekupa mhedzisiro inonyanya kukosha maererano neshanduko dzemabhizimusi ane data-rechokwadi rinoshanda.
Uyewo Verenga: Artificial Intelligence Vs. Machine Kudzidza Vs. Data Sayenzi
Chinja Huru Dhata muMifungo
If you think that big data is about collecting numbers then you need to update your knowledge on it. With the complete transformation in technology, big data has become a vast subject to deal with. There are many data analytics tools including machine learning izvo zvave zvichishandiswa nemakambani kushandura hombe dhata mukufunga iyo inoshandiswa sekutengesa pfungwa.
Izvi zvinogona kuvhiringa vanhu vazhinji sezvo vangave vasina chokwadi chekuti rakakura sei data kana machine learning zvine hukama zvine hukama neDSaaS. Zvakanaka, makambani ari kukwidziridza bhizinesi ravo nerubatsiro rwekufanofungidzira modelling. Icho chinonyanya kudikanwa kunyatsoongorora uye kuongorora kweiyo data kuitira kuti uwane iyo chaiyo kana padyo-kusvika-chaiyo kukosha kweiyo yakatarwa seti. Apa ndipo panoshandiswa mazwi ekupa chimiro chebhizinesi.
Uyewo Verenga: 5 Makiyi Akakosha ese eData Scientist anofanirwa kuve nawo
Kana kambani iri kutambura nekuda kwekushomeka kwemasayendisiti e data saka nzira iri nyore yekukunda izvi ndeyokushandisa data sainzi sevhisi. Iwo mabhizinesi anoenderana zvizere neanofungidzira modelling, kuongorora, uye kudhinda data. Izvi zvinobatsira mukupa chirevo chakakodzera uye pakupedzisira kukura mubhizinesi.
Nekudaro, nekuwedzera kwetekinoroji yekuongorora kwedata, zviri kuve zvakaoma kuti musayendisiti azive nezvazvo. Uku kunova kurasikirwa kukuru kukambani. Asi, nerubatsiro rweDSaaS, kambani inogona kuongorora data nekushandisa izvo chaizvo data sainzi kunyorera. Mumashoko akapusa, inopa mhinduro iri nyore kukambani.
Une chirongwa cheData Sayenzi? Wobva watambanudzira kwatiri kubvunza.